कोरोना भाइरस के हाे, कसरी बच्ने ? - Chhuteka Kura
०९ कार्तिक २०७८ , मङ्गलबार
संगीत तथा नृत्य
फिल्म र थिएटर
छुटेका कुरा(रेडियो कार्यक्रम)
प्रविधि र उद्यम
योग तथा सौन्दर्य
खेलकुद र स्वास्थ
यूवा र राजनीति
शिक्षा र विज्ञान
कानून र न्याय
कोरोना भाइरस के हाे, कसरी बच्ने ?
Chhuteka Kura प्रकाशित मिती : २१ फाल्गुन २०७६, बुधबार १२:१९
चीनको उहानबाट सुरु भएको घातक कोरोना भाईरस संसारभरी माहामारीको रुपमा फैलिरहेको छ ।
यसले संसारलाई ठूलो चुनौती दिईरहेको बेला चीनको अर्थतन्त्रलाई भने डामाडोल बनाईरहेको छ । त्यहाँका जनतामा त्रास फैलिएको छ भने जनजीवन कष्टकर भएको छ ।
कोरोना भाईरसको विश्वव्यापी अवस्था र त्यसको तथ्याङ्क पत्ता लगाउन द सेन्टर फर सिस्टम साईन्स एन्ड इन्जिनियरिङले एउटा अनलाईन इन्फरमेसन सेन्टर बनाईएको छ । जसमा विश्व स्वास्थ्य संगठन, द सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल इन यूएस, चाईन र यूरोपबाट तथ्याङ्कहरु संकलन गरिन्छ । यो अनलाईन डाटा बेसमा कोरोना प्रमाणित भएका, मृत्यु भईसकेका र निकोभएकाहरुको तथ्याङ्क राखिएको छ । जसअनुुसार हालसम्म संसारमा ९३ हजार १ सय ५८ जनालाई संक्रमण भएको प्रमाणित भईसकेको छ भने ३ हजार १ सय ९८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । त्यसैगरी ५० हजार ६ सय ९० जनाले यो रोगलाई जितेका छन् । रेकर्ड अनुसार बुढाबुढी र कमजोरहरुमा यो भाईरसको प्रभाव छिटो र धेरै देखिएको छ ।
WHO मा पहिलो पटक डिसेम्बर ३१, २०१९ मा रिपोर्ट भएको यो भाईरस हाल ७० भन्दा धेरै देशहरुमा प्रमाणीत भैसकेको छ ।
US, Europe, Asia, the Middle East, Africa, South America and Australia मा समेत यो भुसको आगो जसरी फैलिरहेको छ । चीनमा खैलाबैला मच्चाइरहेको यो भाईरस भारतमा ६ जना, र नेपालमा १ जनामा देखिएको प्रमाणित भईसकेको छ । युरोप र अमेरीका, जापान, अष्ट्रोलिया, दक्षिण कोरीया, फिलिपिन्स लगाएतका मुलुकमा धेरै मानिसहरुको मृत्यु भईसकेको छ ।
यसबाट प्रभावित चीनका क्षेत्रहरुमा मानिस बाहिर देखिदैनन्, रोडहरु निर्जन देखिन्छन् भने उनिहरुलाई हस्पिटलमा रोईकराई गरिरहेको भिडीयोहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको थियो ।
यही सन्दर्भमा इरानले ५४,००० कैदीहरुलाई रिहाइ गरेको छ । यो महामारीको डरले न्यायालयले यो निर्णय गरेको बुझिएको छ । इरानमै २३ जना सांसदमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएको उपसभामुख एब्डोलरेजा मेस्रीले बताएका छन् । उक्त संसदमा २९० सदस्यहरु छन् । अहिलेसम्म इरानमा ७७ जनाको मृत्यु भएको र २ हजार ३ सय ३६ जनामा संक्रमण देखिएकोे छ । भाइरसको संक्रमणबाट बच्न इरानी सरकारले भीडभाडमा नजान र सरसफाइमा ध्यान दिन नागरिकलाई आग्रह गरेको छ र यसका लागि ३ लाख सैनिक परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । इरानका वरिष्ठ अधिकारीमा पनि संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ भने कोरोना संक्रमणबाटै इरानमा पूर्वराजदूत, फुटबल खेलाडी, नवनिर्वा्चित सांसद, प्रमुख न्यायाधीशका सल्लाहाकार अहमद त्योस्रकानीको मृत्यु भइसकेको छ ।
मंगलबार प्रकासित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुका फोटो फुटेजमा तेहरानका बाटोहरु उजाड देखिएका थिए ।
के हाे काेराेना भाइरस ?
कोरोना भाइरस (COV) भाइरसहरूको एक ठूलो परिवार हो जसले सामान्यदेखि लिएर अधिक गम्भीर रोगहरू सम्म निम्त्याउँछ । जसलाइ मिडल इष्ट रेष्पिरेटरी सेन्ड्रम (MERS-CoV) र गम्भिर एक्यूट रेष्पिरेटरी सेन्ड्रम (SARS-CoV) भनिन्छ ।
कोरोना भाइरस ZOONOTIC हुन, यसको अर्थ तिनीहरू जनावरहरू र मानिसहरू विच प्रसारित हुनसक्छन् ।
संक्रमणका सामान्य लक्षणहरूमा श्वासप्रश्वासका लक्षणहरू, ज्वरो, खोकी, सासको कमी र सास फेर्न कठिनाईहरू पर्दछन् । धेरै गम्भीर अवस्थामा, निमोनिया, गम्भिर श्वासप्स्वास समस्या, मिर्गौला मा समस्या हुने र मृत्यु पनि हुन सक्छ ।
जनवारबाट सरेर मानिसमा देखिएको यो भाईरस खोकी र हाछिउ गर्दा एक मिटर वरिपरि सर्छ । संक्रमण फैलिन नदिन– नियमित रूपमा हात धुनु, खोक्दा र हाछिउ गर्दा मुख र नाक छोप्ने, मासु र अण्डा राम्रोसँग पकाउने, श्वासप्रश्वासको बिरामीको लक्षण देखिएकाहरूसँग टाढा रहने, खोक्दा हाछिउ गर्दा मुख छोप्नुपर्छ ।
कोरोनासँग सम्बन्धित ग्लोबल हल्ला र यसका परिणामहरु
कोरोना अथवा कोभिड–१९ भाइरसको त्राससँगै बजारमा अनेक हल्ला फैलनु स्वभाविक पनि हो । यसको उत्पति देखि लिएर यसकाे भविष्यसम्मलाई लिएर अनेक डरलाग्दा गन्थनमन्थन हुनेगरेके पाइएको छ ।
बजारमा कोरोना भाईरस र कोभिड १९ बाट बच्न सकिने भनेर अनेक गलत उत्पादनहरूके प्रचारप्रसार भईरहेका छ । भ्रामक समचारहरूले अमेरीकामा समेत हल्लिखल्ली मच्चाएको छ । व्यापारीहरुले “coronavirus face mask” जस्ता ट्यागलाइन प्रयोग गर्दै मार्केटिङ गरिरहेका छन् । कोरोना भाइरसले संक्रमण हुने डरले उपभोक्ताहरूले कोरोनासँग सम्बन्धीत उत्पादनहरु धेरै नै किन्न थालेका छन् । यससँगै स्यानिटाइजर, मास्क, पन्जा र ह्याजम्याट सुट र अन्य सामानहरूको माग र मुल्य दुबै आकासिएको छ ।
यही विचमा अमेजन, इबे, वालमार्ट र एटीसीले कोरोेनाबाट बच्नका लागि चहिने सामाग्रीहरू र मास्कहरू आफूसँग रहेको दावी गरिरहेकाहरू बिरूद्ध संघर्ष गर्नु परेके छ ।
हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा भने कोरोनाको डरले सर्जिकल मास्क प्रयोगमा जोड दिएको देखिन्छ । हाल नेपालमा मास्कको अभाव देखिएको छ । यसले धुलो, धुवा र केही सामान्य किटाणुहरूवाट भने जोगाउँछ । तर यिनीहरुले ठूला भाइरसबाट जेगाउन सक्दैनन् । डाक्टर क्अजबाालभच ले भने । यी मास्कहरू विशिष्टिकृत हिसाबले बनाइएका हैनन् । यिनहरूले, राम्रोसँग नाकमुखलाइ ढाक्न पनि सक्दैनन् । डाक्टरहरूले भनेका छन– सामान्य मास्कले भाइरसबाट बचाउन सक्दैन । धेरै विशिष्टिकृत, N95 Respirator मास्कले मात्रै कही हदसम्म नयाँ केरेना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बचाउछन, जसालाई सार्स–कोभ–२ पनि भनिन्छ । यिनीहरु सर्जिकल मास्कभन्दा मोटो पनि हुन्छ ।
कोरोनावाट बच्ने सबैभन्दा विशेष उपाएहरूः
नियमित रुपमा साबुन पानीले हात धोऔं ।
हात धुदा अल्कोहलबाट बनेका साबुन र स्यानिटाईजरहरुको प्रयोग गरौं ।
भिडभाँडमा नजाऔं ।
जनवारहरुवाट टाढै बसौं ।
खोक्दा वा हाछ्यौ गर्दा नाक र मुख ढाकौं ।
एकपटक प्रयोग गरेको टिस्यू पेपरलाई डस्टविनमा फ्याकौं ।
घुम्ने योजनाहरु नबनाऔं र घरमै बसाैं ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन र सिडीसी को सहयोगमा तयार पारिएको यो जानकारीलाई साथीभाई तथा आफन्तहरुमाझ फैलाउ ।
लाइसेन्स नभएकाहरूलाई पनि एक वर्ष पढाउने अवसर दिदै सरकार
उषा शेरचनको उपन्यास-आधि
कथा– पूर्णता (पर्फेक्सन)
१६ आश्विन २०७८, शनिबार १९:०७
प्रकाशन अघि नै भाइरल बनेको डियर एक्स बजारमा आउँदै
५ आश्विन २०७८, मंगलवार १६:१५
२८ श्रावण २०७८, बिहीबार १६:०६
घर बसे भोकमरी , बाहिर गए माहामारी !
१३ बैशाख २०७८, सोमबार १०:४७
कथा– पूर्णता (पर्फेक्सन) २१ फाल्गुन २०७६, बुधबार १२:१९
प्रकाशन अघि नै भाइरल बनेको डियर एक्स बजारमा आउँदै २१ फाल्गुन २०७६, बुधबार १२:१९
मृत्युशैयाबाट… २१ फाल्गुन २०७६, बुधबार १२:१९
घर बसे भोकमरी , बाहिर गए माहामारी ! २१ फाल्गुन २०७६, बुधबार १२:१९
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको रिजल्ट यसरी हेर्नुस । २१ फाल्गुन २०७६, बुधबार १२:१९
कोरोनाकाे बारेमा के भन्छ याेग- याेगाग� [...]
५ चैत्र २०७६, बुधबार ०७:०५
हाेली-कविता वाचन [...]
२५ फाल्गुन २०७६, आईतवार १४:०६
कोरोना भाइरस के हाे, कसरी बच्ने ? [...]
२१ फाल्गुन २०७६, बुधबार १२:१९
अलविदा इरफान खान [...]
१७ बैशाख २०७७, बुधबार ०८:२६
जुम एपबाट धेरै कुरा गरियाे एकैछिन जुम [...]
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०८:०८
Tweets by Chhuteka Kura
Shilpashala International Multipurpose Pvt. Ltd.
ठेगानाः डिल्लीबजार २९, काठमाडाैं
सम्पादक: कैलाश कुमार कार्की
सह-सम्पादक/फाेटाे पत्रकारः काेमल अधिकारी
सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं.१९५०/०७६/७७
Copyright © 2020 Chhuteka Kura All Rights Reserved.
Powered By: Greative Soft